Umthandazo ongummangaliso Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ukuba ujonge okona kulungileyo umthandazo ongummangaliso Kungenxa yokuba kufuneka wenze umthandazo obaluleke kakhulu eNkosini, okanye ngenxa yokuba ufuna ukuyibulela ngeentsikelelo ezingapheliyo ezikunika yonke imihla, uze endaweni eyiyo.
Yiza ecaleni kwam, uMoya oYilayo, kwaye undwendwele umphefumlo wekhoboka lakho elithembekileyo kula maxesha anzima.
1 Umthandazo Omangalisayo
2 Cengceleza umthandazo ongummangaliso
2.1 Umthandazo omangalisayo kuThixo
2.2 Umthandazo omangalisayo wokusondela kuThixo
2.3 Umthandazo omangalisayo wokucela kuThixo ukuba uphilise ilungu losapho
2.4 Umthandazo wokuphilisa ngokungummangaliso
2.5 Amatyala angxamisekileyo, umthandazo kuSanta Rita
La umthandazo ongummangaliso Yeyona yenzekayo kwelona xesha linzima, apho imikhosi yethu inganikeli ngaphezulu kwaye ukungakhathali kuyaphuphuma, yiyo loo nto sisondela kule mithandazo, ukucela amandla eNkosini, sibeka lonke ukholo lwethu nethemba lethu kuye.
Inceba kaThixo ihlala ihamba kubo bonke abantu abazinikeleyo abenza imithandazo yabo kwiNkosi uSomandla. Ayinamsebenzi imeko esizifumana sikuyo, kuba ngengubo yakhe, uzigubungela zonke iindumiso zethu. Inkqubo ye- imithandazo engummangaliso Zithunyelwe ngqo kwiNkosi okanye kwisanta ethile, ukuze isincenge, ukuze isinike amandla okuqhubeka sisilwa.
Nangona eyona mithandazo iphambili ibhekiswe kuMdali, kweli nqaku unokufumana nemithandazo engummangaliso ebhekiswe kwiingcwele nakwiintombi ezinyulu, ke ngoko sinokuyisebenzisa yonke inceba kunye nesisa sakhe. Kubaluleke kakhulu ukuba sihlale sikhumbula ukuba ukucengceleza umthandazo ayisiyokuwubhengeza nje kuphela, kodwa ukuwuva kwaye ukuwuchaza ngomntu wonke, kuba oku kuyimfuneko ukubonisa lonke ukholo kunye nethemba lethu, sichaza yonke iminqweno yakho kwaye izicelo kuThixo.
Owona mthandazo ubalaseleyo, oyena wenza ngokwenene umthandazo ongummangaliso okanye enamandla, yinto eyenziwa ngokuthobeka kokwenene kunye nokuzinikezela ngokupheleleyo. Ayisiyo malunga nokuzithoba okanye uziphathe kakubi, akukho nanye kuloo nto, imalunga nokuvula iimvakalelo zakho eNkosini, wamkele ukuthanda kwakho, ngaphandle kokukhathazeka okanye ukuzicinezela. Xa usenza oku, uyangqina ukuba uBawo ongunaPhakade unezona zicwangciso zibalaseleyo zobomi bakho. Mcele ukuba enze intando yakhe hayi eyakho, emva koko unokumxelela yonke iminqweno yakho.
Xa usenza i- umthandazo ongummangaliso Kuya kufuneka unike yonke inkxalabo yakho kunye nokungaqiniseki eNkosini, kunye nokholo lwakho, ukuba uzibeke ezandleni zeNkosi kwaye wenze ukuthanda kwaKhe. UThixo uyakukukhokela kwindlela akubekele yona, kodwa oku kufuneka umamele iminqweno yakho yangaphakathi kwaye ufumane inceba kaThixo kuyo yonke impilo yakho. Funa ukuba ingqondo yakho inikezele kwiminqweno yentliziyo yakho kwaye unokwenza uhlobo lwesicwangciso sokuhamba ngokwalo myalezo ungcwele.
Cengceleza umthandazo ongummangaliso
Njengoko sele sazi, singathandaza ngokuthe ngqo kwiNkosi uSomandla, njengoko sinokuthandazela abangcwele abathile ukuba basinike ummangaliso esifunayo. Apha ngezantsi siza kubonisa eminye imithandazo kuThixo nakwabangcwele. Unokuthanda: Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngomsebenzi
Umthandazo omangalisayo kuThixo
'' Thixo Somandla, Mdali wezulu nomhlaba; Wena usinike isipho sobomi kwaye usizalise ngovuyo lokukwazi ukuKudumisa; ukuba usibonise inceba yakho engenasiphelo.
Namhlanje ndiza phambi kwakho, Bawo ongunaPhakade, ukuze ndicele ububele bakho nothando lwakho: Ndiyakucela ukuba ungavumeli nantoni na ukuba indenzakalise, mna okanye usapho lwam. Sikhokele kwaye ube nenceba kuthi. Amen. ''
Umthandazo omangalisayo wokusondela kuThixo
`` Nkosi, namhlanje ndilapha, phambi kobuso bakho obungcwele, ndiyakunqula kwaye ndikunika imbeko. Ndiqubuda kuwe Bawo, ndikwazisa njengokukhanya kwam nosindiso lwam. Ndiyakuthanda kwaye ndikuthembele ngokupheleleyo. Wena osoloko usecaleni kwam kwaye ungaze undishiye, othi ngamaxesha okuwa ndihlale ndithatha isandla sam ukuze ndiphakame.
Namhlanje ndiyakuxelela ukuba andiyonto ngaphandle kwakho Nkosi yam, kuba konke endinako kungenxa yokuba undinike. Ngeyakho infinito Uthando ndingenza yonke into, ndivumele ukuba ndisondele kuwe ndicime nasiphi na isithintelo kwindlela yam. Ndifuna uthando lwakho luhlale ngaphakathi kwentliziyo yam.
Uyadunyiswa uYise, Nyana noMoya oyiNgcwele. Yiza kum, ndincede ndibengumzekelo wokuzinikela kubahlobo nakwintsapho yam, ilizwi lam malibe lilizwi lakho kwaye nentando yakho ibe yeyam. Ngawe ndingomelela, ndinoxolo akukho nto indoyikisayo. Amen ''
Inceba yeNkosi ihlala ikhona ukunceda bonke abo bathembekileyo abathi baphakamise imithandazo yabo egameni lakhe.
Umthandazo omangalisayo wokucela kuThixo ukuba uphilise ilungu losapho
`` Nkosi Somandla Somandla, wena undijonga ngamehlo anemfesane, othi ezandleni zakho abeke izinto ezisixhalabisayo, iminqweno kunye nethemba ngokuthembela okungapheliyo.
Wena, Mdali wendalo iphela, umlungisi weentliziyo ezilahlekileyo nezilahlekisayo. Namhlanje ndiyakucela ukuba ubuyisele impilo kwilungu losapho lwam elixabisekileyo, ukuze umsindise kububi obo bumhlaseleyo.
Yiba ngumthombo wokuphilisa, gcwalisa umoya wakhe kwaye ubuyisele impilo kulo mkhonzi uthobekileyo usweleyo. Ndicela oku egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. ''
Umthandazo wokuphilisa ngokungummangaliso
'' Namhlanje ndibhenela uSanta Anthony wasePadua; kuwe Ntombikazi eyiNgcwele kaThixo; Ndibongoza ubukho bakho obunenceba uYesu Krestu, ukuze bandithandazele phambi koThixo uBawo uSomandla.
Namhlanje ndiyakucela ukuba undincede ngalo mzuzu wentuthumbo, kuba andikho sempilweni kwaphela, ndifuna uncedo lwakho ukuze ndikwazi ukuphakama kwaye ndiphumelele kolu sizi.
Mna, othe ebomini bam wabonisa ngokuthembeka ukuzinikela kwam, namhlanje ndiyakubongoza ngethemba elikhulu lokuba undincede kwezi yure zokwehla. Ndiyazi ukuba ngoncedo lwakho ndiza kuba nakho ukubuyisa amandla am. Amen ''
Amatyala angxamisekileyo, umthandazo kuSanta Rita
'' Owu Rita oNgcwele! Namhlanje ndiza kuwe, ukuze undinike ubukho bakho obungenabala. Namhlanje intliziyo yam ididekile kwaye iphelelwe lithemba.
Ndiza kuwe kuba ndiyazi ukuba ngawe ndinokuwuzolisa umphefumlo wam. Kuwe nkosazana ethandekayo, uyazi inxunguphalo, ngeli xesha ndikunika iingxaki zam kunye nothando lwam lonke.
Ukuze undinike isisombululo seengxaki ezindongamele kakhulu. Wena ntombi yeNkosi, ndinika iintlungu zam ukukhanyisa indlela yam. Amen. ''
Kwimeko apho ufuna ukwazi ngakumbi ngemithandazo engummangaliso, ndiyakumema ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo: